Dowladaha Sudaan iyo Etoobiya oo Dagaal qarka u saaran | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dowladaha Sudaan iyo Etoobiya oo Dagaal qarka u saaran
Dowladaha Sudaan iyo Etoobiya oo Dagaal qarka u saaran
Muran xuduudeed tobaneeyo sano soo jiitamayay oo udhaxeeyay Itoobiya iyo Suudaan ayaa ku hanjabaya inuu isu badalayo dagaal dhanka xuduuda ah. Dhinacyadu waxay isku dhaceen bishii Diseembar 2020 wixii markaa ka dambeeyayna waxay dhigeen xoogag aad u hubeysan aagga beeraha barwaaqada leh ee al-Fashqa.
Wadamadu waxay wadaagaan xuduud dhererkeedu yahay 744-kiiloomitir, oo la isku haysto tan iyo qarnigii 19aad xilligii gumeysiga.
Sannadihii ugu dambeeyay, al-Fashqa waxay noqotay bar-tilmaameed.
Waxay ku taal gudaha xuduudaha caalamiga ah ee la aqoonsan yahay ee Suudaan, al-Fashqa waxay ka go’antahay dalka intiisa kale laba wabi mana laha isbaarooyin ama caqabado xadka ay la wadaagaan Itoobiya. Suudaan waxay sheegatay inay xaq u leedahay dhulkaas, in kasta oo beeralayda Itobiya ay degeen oo ay dhul beereen isla markaana ay cashuur siiyeen masuuliyiinta Itoobiya in ka badan 25 sano.
William Davison, oo ah falanqeeye sare oo Itoobiyaan ah kana tirsan International Crisis Group , ayaa u sheegay Deutsche Welle (DW).
Ma cadda sida saxda ah ee dhalisay soo ifbaxa khilaafkan soo jireenka ah ee soo jireenka ah. Ilo wareedyo ayaa sheegaya in laga yaabo in ciidamada amaanka ee Suudaan ay ka jawaabeen duulaanka beeraleyda Itoobiyaanka ah, oo iyana keeneen ciidamada amaanka ee Itoobiya. ”
Afar askari oo reer Suudaan ah ayaa ladilay, 27 kalena waa lagu dhaawacay meel u dhow xadka bishii Diseembar 15, taas oo ay Suudaan ku andacootay in ay gaadmo ku dileen maleeshiyo Itoobiyaan ah.
Tan iyo waagaas, saraakiisha labada ummadoodba waxay cabireen hadaladooda.
Intii militariga Itoobiya ay ku mashquulsanaayeen khilaaf ba’an oo gudaha ah oo ka dhacay gobolka Tigrey, ayaa safiirka u fadhiya Khartoum, Yibeltal Aemero, wuxuu ku eedeeyay Ciidamada Qalabka Sida ee Suudaan in ay u dhaqaaqeen dhulka xadka lagu muransan yahay.
“Ciidamada Suudaan ayaa ka faa’iideystay waxayna galeen qoto dheer gudaha dhulka Itoobiya, waxay bililiqeysteen hanti, waxay gubeen xeryo, waxay xireen, weerareen oo dileen Itoobiyaanka halka kumanaan ay barakiciyeen,” ayuu ku yiri hadal uu soo saaray.
Suudaan iyo Itoobiya waxay sameeyeen guddi isku dhaf ah bishii Diseembar si ay u xalliyaan muranka dheer ee al-Fashqa, laakiin xiisaddu waxay kacday bishii Jannaayo markii Suudaan ku eedeysay Itoobiya inay soo dirtay diyaarado dagaal hawadeeda.
Dabayaaqadii bishii Janaayo, Itoobiya waxay ku eedeysay Suudaan in ay soo qaaday weeraro militari oo ay la socdeen kolonyo gaashaaman oo ku sugnaa xadka ay wadaagaan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Itoobiya ayaa sheegtay in weeraradaasi ay ku dhinteen “dad badan oo rayid ah.”
Afhayeenka dhinaca arimaha dibada Dina Mufti ayaa saxaafada u sheegay in dhinaca Suudaan ay u muuqato inay kusii siqayaan xaalada ka taagan dhulka. “Ilaa intee ayay Itoobiya sii wadi doontaa xalinta qaddiyadda iyadoo adeegsanaysa diblomaasiyad?
“Hagaag, ma jiraan wax aan xad lahayn. Wax walba waxay leeyihiin xad. ”
Wasiirka warfaafinta suudaan faysal maxamed saalax ayaa hanjabaadaasi ka jawaabay asaga oo sheegay in dalkiisu uusan dagaal rabin laakiin uu ka jawaabi doono gardaro kasta oo lagu soo qaado.
“Waxaan ka baqeynaa in hadaladan ay ku jiraan mowqif cadowtinimo oo ku wajahan Suudaan,” ayuu u sheegay Reuters. Waxaan ka codsaneynaa Itoobiya inay joojiso weerarada ay ku hayso dhulka Suudaan iyo beeraleyda Suudaan.
Kordhinta xadka ayaa ku soo beegmeysa xilli Suudaan, Itoobiya iyo Masar ay sidoo kale halgan ugu jiraan sidii ay ugala hadli lahaayeen xuquuqda biyaha biyo xireenka weyn ee Itoobiya ka dhistay wabiga Niil.
“Uma muuqato in dhacdada xadka ay carqalad weyn ku keentay wadaxaajoodka [biyo xireenka],” ayuu Davison u sheegay DW.
Wuxuu intaas ku daray in wali ay jirto waqti iyo fursad diblomaasiyadeed.
“Waxaan gaarnay halkii ugu adkeyd,” ayuu yiri. Waxa kale oo jira fursado badan oo dhinacyadu ay dib ugu noqon karaan oo ay iskaga fogayn karaan rajada isku dhaca. ”
Waxa uu sheegay in khilaaf hor leh uu yahay waxa ugu dambeeya ee uu u baahan yahay gobolka jilicsan xilligan.
“Rajada ay Itoobiya ka qabto furitaanka waji kale oo militari waa mid walwal leh, maxaa yeelay wadanku horeyba waa u jilicsanaa,” ayuu yiri Davison. “Haddayna yeelan lahayd xasillooni darro badan oo gudaha ah, taasi waxay sidoo kale lahaan doontaa dhibaatooyin gobolka ah
Previous articleFarmaajo kursi doon ma ahan ee waa Dhiig doon waa bayaanka iyo Go anka Beesha Hawirye kasoo baxay caaway
Next articleMiirka Al Shabaab oo ka hadley Doorashada Dalka Jabuuti
Hogaamiyihii Myanmar Awn Saan Suujii oo eedayn Musuq Maasuq wajahaysa Maxkamad...
Wasiirka warfaaafinta Galmudug oo sheegay in Ciidamo ka tirsan Al-shabaab iska...
Golaha Bad baadinta Qaranka oo shir uga furay Xarunta sida weyn...
Israel oo Iiraan ku eedaysay argagixisnimo kadib weerarkii markab shidaal
MUsharixiinta “ waxaan uga digaynaa saraakiisha iyo ciidamada dowladda, inay ku...